Tag: iguzosi ike n'ezi ihe | Martech Zone
Tag: iguzosi ike n'ezi ihe
Atụmatụ ndị na-egbu ahịa ọdịnaya gị #CONEX
Ịgụ Oge: 2 nkeji Nyaahụ m kesara ọtụtụ ihe m mụtara banyere iwu ABM azum na CONEX, ogbako na Toronto na Uberflip. Taa, ha wepụtara nkwụsị niile site na iweta ọmarịcha ahịa ọ bụla ụlọ ọrụ ga-enye - Jay Baer, ​​Ann Handley, Marcus Sheridan, Tamsen Webster na Scott Stratten ịkpọ aha ole na ole. Agbanyeghị, vibe ahụ abụghị ụdị ọdịnaya gị ga - esi tos na ndụmọdụ. Ọ bụ naanị echiche m, mana mkparịta ụka taa dị ọtụtụ karịa
Ịgụ Oge: 3 nkeji Izu ole na ole gara aga anọghị m n’obodo ma achọghị inyefe oge dị ukwuu iji dee ọdịnaya ka m na-agakarị. Kama ịchụpụ ụfọdụ ịnyịnya ibu, amaara m na ọ bụ oge ezumike maka ọtụtụ ndị na - agụ akwụkwọ m yana m họọrọ ịghara ide kwa ụbọchị. Mgbe idechara afọ iri, nke ahụ bụ ụdị ihe na - eme m nzuzu - ide bụ naanị akụkụ nke
Ịgụ Oge: 2 nkeji Marketingzụ ahịa n'oge a bụ ihe na-atọ ọchị; ebe mgbasa ozi ahịa weebụ dị mfe karịa karịa mkpọsa ọdịnala, enwere ọtụtụ ozi dịnụ na ndị mmadụ nwere ike kpọnwụọ na ọchịchọ maka ịmatakwu data na 100% ozi ziri ezi. Maka ụfọdụ, oge echekwara site n'inwe ike ịchọpụta ọnụọgụ ndị mmadụ hụrụ mgbasa ozi ha n'ịntanetị n'oge ọnwa enyereghị aka site na oge